Isithethi I-Sperso ivela kumagama amabini eSperm kunye neSandi. Ubume beglowubhu yeglasi kunye nesithethi emngxunyeni wayo entloko bubhekisele kwinto yobudoda kunye nokungena ngokunzulu kwesandi esijikelezileyo njengomlilo wesidoda sendoda kwi-ovum yowesifazane ngexesha lokuzala. Injongo kukuvelisa amandla aphezulu kunye nesandi esiphakamileyo esijikeleze okusingqongileyo. Yinkqubo engenantambo eyenza ukuba umsebenzisi akwazi ukuqhagamshela ifowuni yakhe ephathekayo, ilaptop, iitafile kunye nezinye izixhobo kwisithethi ngeBluetooth. Isithethi esophahleni singasetyenziswa ngokukodwa kwigumbi lokuhlala, amagumbi okulala kwigumbi leTV.
Uphando Lwezakhiwo Kunye Nophuhliso
Uphando Lwezakhiwo Kunye Nophuhliso Iprojekthi yoyilo lweZiko leTekhnoloji linesikhokelo sokudityaniswa kobuchule bokuyilwa kwindawo engqongileyo, indawo ezolileyo nethandekayo. Oku kuchazwa kwe-Idea kwenza ukuba i-ensemble ibe yindawo enophawu lomntu, emiselwe ukuqondiswa okufanelekileyo kwengqondo yabaphandi abaza kwenza kuyo, kuboniswe kwiplasitiki nakwinjongo eyakhayo. Uyilo oluthe kratya kunye nokudityaniswa kophahla lophahla ngendlela ye-concave kunye ne-convex iphantse ichukumise imigca enqamlezileyo echanekileyo ichaza ngaloo ndlela, ezona mpawu zibanzi ziyilo lobugcisa.
Isitulo Isitulo se-Ane sinemigangatho eqinileyo yamaplanga ebonakala ngathi idada ngokukuko, kodwa ngokuzimeleyo kwimilenze yamaplanga, ngaphezulu kwesakhelo sesinyithi. Umyili uthi isihlalo, esenziwe ngesandla kwimithi eqinisekisiweyo ye-eco-friendly, senziwa ngendlela eyahlukileyo yokusebenzisa iziqwenga ezininzi zomgangatho omnye wokhuni zibekwe zaza zasikwa ngendlela enamandla. Xa uhleli esihlalweni, ukunyuka okuncinci kwi-engile ukuya ngasemva kunye nokuqengqeleka kwii-angles kumacala kugqitywa ngendlela enikezela imeko yendalo yokuhlala efanelekileyo. Isitulo se-Ane sinomgangatho ofanelekileyo wobunzima bokwenza ugqatso oluhle.
Iphakheji Yetiye ITea Hall Brand, ukuthatha umfanekiso wokuchitha kunye nokusasaza iti ngokukhululekileyo nangokuzonwabisa, umbono wenkqubo yokuvelisa iti, omelele okanye obuthathaka, uguqula ngokungalindelekanga, njengenqaku lokupeyinta iti ngelixa unambitha iti. Umtsalane oqhelekileyo wokuthatha iti njengeinki kwaye usebenzise umnwe njengosiba, ukuzoba iingqondo zolwandiso lweti yeholo yosapho ye-holng kunye nembonakalo yomhlaba. Uyilo lwepakeji yentsusa lubonisa umoya ococekileyo, ukuchaza ixesha elimnandi lokuphila ubomi kunye neti.
Ukukhuthaza Uphawu IProjekthi ye-Yellow yiprojekhthi yobugcisa ebanzi eyakha ingqokelela yokubonakalayo yento yonke etyheli. Ngokwombono ophambili, ukuboniswa okukhulu kwangaphandle kuya kwenziwa kwizixeko ezahlukeneyo, kwaye uthotho lwenkcubeko kunye nolwakhiwo luya kuvela ngexesha elinye. Njenge-IP ebonakalayo, iProjektha i-Yellow inomfanekiso obonakalayo kunye nenkqubo yombala esebenzayo yokwenza umbono ongobumbano, owenza abantu bangalibaleki. Ilungele ukukhuliswa okukhulu kwe-intanethi kunye nokungaxhunyiwe kwi-intanethi, kunye nokukhutshwa kwezinto ezibonakalayo, yiprojekthi yoyilo eyahlukileyo.
Uyilo Lwepenki Ebonakalayo
Uyilo Lwepenki Ebonakalayo IProjekthi ye-Yellow yiprojekhthi yobugcisa ebanzi eyakha ingqokelela yokubonakalayo yento yonke etyheli. Ngokwombono ophambili, ukuboniswa okukhulu kwangaphandle kuya kwenziwa kwizixeko ezahlukeneyo, kwaye uthotho lwenkcubeko kunye nolwakhiwo luya kuvela ngexesha elinye. Njenge-IP ebonakalayo, iProjektha i-Yellow inomfanekiso obonakalayo kunye nenkqubo yombala esebenzayo yokwenza umbono ongobumbano, owenza abantu bangalibaleki. Ilungele ukukhuliswa okukhulu kwe-intanethi kunye nokungaxhunyiwe kwi-intanethi, kunye nokukhutshwa kwezinto ezibonakalayo, yiprojekthi yoyilo eyahlukileyo.
Isithethi Uphando Lwezakhiwo Kunye Nophuhliso Isitulo Iphakheji Yetiye Ukukhuthaza Uphawu Uyilo Lwepenki Ebonakalayo